Accueil > Gazetin'ny nosy > Accès Bank : Tery vay manta no anaovany ny mpanjifany
Accès Bank : Tery vay manta no anaovany ny mpanjifany
Noho ny tsy fananan’ny fitondram-panjakana nifandimby teto politikam-pirenena tena marim-pototra ho amin’ny tena fampandrosoana maty paika dia tsy mba nahazo rariny tamin’ireo banky miorina eto ny vahoaka te hiavo-tena sy te handray anjara amin’ny fampivoarana ny firenena. Vokatr’izany dia nohararaotin’ny mpanam-bola izany ka tafiditra an-tsehatra teto ny ambara hoe “mpampisambo-bola madinika” (micro finances). Izany hoe ireo mpandraharaha madinika, toy ny mpivarotra, mpanao asa tanana, mpiompy sy mpamboly, sy ny hafa, dia nojonoin’ireny mpampisambo-bola madinika ireny, ka isan’izy ireny ny antsoina hoe “Accès Bank”. Tsy volabe akory no ampisamborin’ireny mpampisambo-bola madinika na “micro-finances” ireny saingy mavesatra ny zana-bola alainy, ary fotoana fohy ny tsy maintsy anoneran’ny mpindrana azy.
Maro no roboka na tsy tena hahafahan’izy ireny mihoitra mankaiza aza ny vola samborina amin’izy ireny. Amin’izao fotoana, noho ny fepetra fihibohana dia mikatso avokoa ny asa fihariana amin’ny ankapobeny. Tsy ilaina tanisaina na hazavaina intsony izany. Vao nanomboka izao hamehana ara-pahasalamana ka nampiharana ny fihibohana izao dia efa nanambara ny fitondram-panjakana mba hifampitsinjo. Isan’ny voambara mivantana ny momba ireny fampisamboram-bola avy amin’ny banky isan-tokony ireny sy ny fanonerana azy. Tsy inona izany fa ny hoe “mba ahemotra fa samy voakenda”. Ny Accès Bank manokana dia tsy te hahalala an’izany fa ataony tery vay manta sy horohoroiny mihitsy aza ny mpanjifa ao aminy fa tsy maintsy manonitra ny vola nosamboriny, hono. Misy ny manome safidy ny mpanjifany hoe “raha manaiky hanao fifanarahana vaovao ianareo fa hanemotra ny fanonerana na hanalava ny fotoana hanaovana izany dia miakatra araka izany ihany koa ny zana-bola”.
Eo anoloan’izany, misarika ny sain’ny tompon’andraikitra ara-panjakana izahay mba hampahatsiahy ny fepetra tokony hajaina amin’izany tranga izany fa tena fanararaotana, indrindra fa amin’izao fotoana mahavoakenda ny rehetra noho ny fihibohana izao. Tsorina fa ireo mpivarotra na mpamboly na mpiompy sy mpanao asa tanana nisambo-bola tamin’ny Accès Bank ireo dia tena ianjadian’ny fanenjehan’ny Accès Bank isanandro mba hanefa izay vola matiny amin’iny andro iny. Na ny renivola nosamborina tamin’ny Accès Bank aza ve amin’izany tsy ho lany ritra, ary inona no mba hiveloman’ireo mpanjifa na hivelarany nefa izay no tarigetran’ny fampisamboram-bola madinika toa ireny? Ny marina dia fampitomboana ny fahoriam-bahoaka ilay izy.
Demokrasia : Tsy mandroso ny firenena tsy misy mpanohitra
Polisim-pirenena : Ny vahiny ihany no omena tombon-dahiny ?
« Bande des 5 » politika : Miala any indray ka hanimba an-dRajoelina
Antananarivo Renivohitra: Tsy hakana hetra ny fananganana trano latsaky ny 10 tapitrisa Ar
Fepetra ara-pahasalamana : Nampitandrina ireo minia tsy manaja izany ny préfet
Lokomby : Trano 350 mahery no kilan’ny afo
Vaky Bantsilana : Natao hitsikera ny mpanao politika
Ministeran’ny fanabeazam-pirenena : Misy manipy hoditr’akondro ?
Fanalavana fe-potoam-piasana : Manofy atoandro ry Olivier Rakotovazaha sy namany
Alaotra Mangoro : Toerana talem-paritra sandaina 10 tapitrisa ariary